CODEE - Neighborhoods | seattle.gov
/ Home / ... / Your Voice, Your Choice / Get Involved / Vote / CODEE
Laga bilaabo Juun 3 - Juun 30, waa fursad aad u heleyso inaad u codayso mashaariicda horumarinta beerta nasashada ama waddada aad ugu jeceshahay.
Waa dhammaan qayb ka mid ah mashaariicda Magaalada Seattle ee Codkaaga, Doorashadaada: Beeraha Nasashada & Waddooyinka, oo ah hindise miisaaniyadayn laga qaybqaato oo deggenayaashu hab demoqraadi ah u go'aamiyaan sidii loogu kharash garayn lahaa qayb ka mid ah miisaaniyadda Magaalada baaxad hoose ahaan horumarinnada beerta nasashada iyo waddada. Wadar ahaan $285,000 ayaa loo qoondeeyay Gole Magaalo Degmo kasta oo deggenayaasha ayaa codkooda u bixin kara saddexdooda doorasho ee ugu sarreeeya ee ka midka ah degmada ay ku nool yihiin, ka shaqeeyaan, ku helaan adeegyada, ama u tabarucaan.
Gole Magaalo Degmo kasta ayaa iskeed u yeelan doonta codayn u gaar ah 8-10 mashaaric wada jiraba. Mashaariicda waxa laga xushay ku dhowaad 900 oo haa fikrado ay soo gudbiyeen bishii Febrawari xubnaha beesha ee Seattle oo dhan ka soo jeeda.
Xubnaha beesha ee da'doodu tahay 11 iyo inta ka wayn ayaa lagu mariqaadayaa inay ku codeeyaan onlayn ama qof ahaan yimaaddiin xarun codaynta inta u dhexeysa Juun 3-30. Waraaqaha codsbixinta ayaa waliba laga heli karaa xarumaha beesha iyo maktabadaha. Mashaariicda hela codadka ugu badan ayay Magaaladu fuundayn doontaa oo la hirgalin doonaa 2018.
Codbixinta ayaa la tirin doonaa ka dib Juun 30, oo mashariicda guulaystay ayaa lagu dhaqaaqi doonaa July 18.
Fadlan la xidhiidh Kraig.Cook@seattle.gov, 206.256.5944 haddii aad u baahan tahay codbixin waraaq ah.